के एउटा व्यक्तिको रूपमा मर्छ भने | USAHello | USAHello
विद्यार्थी पुनः सर्वेक्षण
तपाईं कसैले संयुक्त राज्य अमेरिका मा मृत्यु हुँदा लिन आवश्यक कदम पत्ता. तपाईं छोड्न किनभने एक परिवारको सदस्य मर्छ चाहनुहुन्छ भने के पत्ता, वा त्यो अर्को देशमा मृत्यु.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा, अधिकांश मानिसहरू अस्पताल वा सुत्केरी घरमा मर्न. नर्स र डाक्टर कसैले मृत्यु हुँदा के थाहा हुनेछ. तिनीहरूले तपाईं मार्गदर्शन गर्न प्रश्न र निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ. अमेरिकी भन्न सक्छ “मृत्यु” वा “पारित” बरु “मृत्यु”. तपाईं शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्छ “मृतक” वा “crochet” वा “रहिरहन्छ” जब तिनीहरूले शरीर कुरा.
एक व्यक्ति किनभने रोग को घर मा मृत्यु भने के, एक डाक्टर वा तपाईंलाई मदत गर्न एक चिकित्सा कामदार हुन सक्छ. के तपाईं तयार छन् सम्म केहि गर्न आवश्यक छैन. तपाईं कुनै पनि धार्मिक समारोह वा तयारी लागि आवश्यक समय लाग्न सक्छ. चिकित्सा कर्मियों मृत्युको औपचारिक घोषणा जारी र बाहिर प्रकारका भर्न सक्नुहुन्छ.
कसैले अचानक मृत्यु भने, कल गर्न आवश्यक हुनेछ 911 एक मृत्यु रिपोर्ट. एक प्रहरी अधिकारी वा आपतकालीन कामदार आउनेछ. तिनीहरूले चिकित्सा परीक्षक भन्नेछु. चिकित्सा परीक्षक शरीर हेर्छ र थाह वा व्यक्ति मृत्यु कसरी प्रमाणित गर्ने एक व्यक्ति छ.
कसरी मृत्यु सामना गर्न अपेक्षा छैन
मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त
चिकित्सा परीक्षक मृत्युको दर्ता लागि मृत्यु प्रमाणपत्र सुरु हुनेछ. मृत्यु प्रमाणपत्र भविष्यमा एक हप्ताको वा बढी हुनेछ. तपाईं मृत्यु प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न धेरै अधिकारीहरु आग्रह गरिने. तपाईं गर्न आवश्यक 10 मृत्यु प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी.
थप मृत्यु प्रमाणपत्र कसरी अनुरोध गर्न
Funerals र बलिरहेको
दफन लागि अन्त्येष्टि घर को मृत्यु शरीर जाने गर्नुपर्छ तयार गर्न. को अन्त्येष्टि को भूमिका पनि महंगा छ. निर्धारित दाहसंस्कार भने (तपाईं दिइएको खरानी भस्म) , तपाईं अन्त्येष्टि घर भुक्तान गर्न आवश्यक छैन. कसैले मृत्यु हुँदा शरीर सीधा आहुति को शरीर गर्न अस्पताल वा तपाईँको घर देखि जान सक्नुहुन्छ.
तपाईं एक महंगा कास्केट किन्न आवश्यक छैन (बक्स गाडे). त्यहाँ काठ बक्से र गत्ता सरल दाहसंस्कार र दफन लागि उपयुक्त हो. तपाईं आफ्नो अन्त्येष्टि समारोह गर्न वा धार्मिक सेवा चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
कसैले मृत्यु हुँदा तपाईंलाई आवश्यक कुराहरू:
मृत्यु प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी प्राप्त गर्न
सम्पर्क कुनै पनि सरकारी विभागहरु यस्तो सामाजिक सुरक्षा रूपमा लाभ, प्रदान
बीमा कम्पनीहरु भन्नुहोस्: स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा र कार बीमा कम्पनीहरु र घरहरू
सम्पर्क कुनै पनि बैंक यसको खाता छ
तपाईं तिर्नुपर्छ कि बिल को सूची बनाउन र कुनै पनि सेवा रद्द (यस्तो फोन रूपमा) यसलाई प्रयोग गर्न छ
क्रेडिट कार्ड को रद्द सेवा र अन्य मासिक भुक्तानी लागि भुक्तानी जारी छैन भनेर
म अझ बढी जान्न
कसैले को मृत्यु पछि के गर्न
मृत्युको घटना पछि: सूचीबारे (यो वाशिंगटन को अवस्थामा भन्छिन्, तर यो तपाईं आफ्नो सूची आफ्नै सिर्जना गर्न मद्दत गर्न कुनै पनि अवस्थामा उपयोगी छ)
के व्यक्ति अर्को देशमा मृत्यु भने?
शायद तपाईं अन्य देशहरूमा परिवारका सदस्यहरूले छ. कसैले मर्छ वा अर्को देशमा मर्न गर्दा, तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ. यो महत्त्वपूर्ण छ: म प्रस्थान अघि आपतकालीन मा यात्रा गर्न सम्बन्धित जोखिम र नियमहरू बुझ्न.
यसलाई के भन्छ अमेरिकी भन्सार र अध्यागमन सेवा पढ्नुहोस् (USCIS) आपतकालीन यात्रा को लागि
तपाईं कुनै पनि शङ्का छन् भने तपाईं जाने अघि, कसैले गर्न USCIS मा कुरा.
के तपाईं उचित कागजातहरू बिना फर्कन अनुमति सक्छ. USCIS यात्रा कागजात चार प्रकार जारी:
यात्रा कागजात बारे USCIS जानकारी
शरणार्थी को यात्रा कागजात